Ngaba iisimboli zokubeka eziphezulu zihlala zihambelana nomxholo womdlalo? 2022
Matshi 12, 2022 SAN
Ngaba iisimboli zokubeka eziphezulu zihlala zihambelana nomxholo womdlalo?
Zininzi kakhulu ii-slot zemidlalo ezikhoyo ezinokuba nzima ukukhetha efanelekileyo ukuba idlale. Akukho mntu ufuna ukuchitha lonke ixesha elabelweyo lokudlala ekhangela esona sakhiwo silungileyo kubo kuphela ukufumana ukuba liphelile ixesha labo kwaye abanakudlala kwaphela.
Kungenxa yoko le nto imixholo ibalulekile. Ukuba uyazi ukuba loluphi uhlobo lomxholo ofuna ukudlala kuwo Bezy, ngokungacacanga okanye ngokuthe ngqo, ungagcina ixesha elininzi kwaye uye ngqo ukuya kudlala.
Kodwa nokuba ukhetha umxholo owuthandayo, ngaba oko kuthetha ukuba uza kuphumelela kuwo? Ewe akunjalo - umxholo awunanto yakwenza nokuba unethamsanqa kangakanani na okanye ungaphumelela malini.
Yinxalenye yolonwabo nje, kwaye enyanisweni, ayizukubaluleka ukuba ukhetha wuphi umxholo kuba iziphumo ziya kufana- uya kuphulukana namathuba kodwa ithuba elincinci lokuphumelela yile nto igcina abantu bedlala.
Njengokuba imixholo imnandi, eneneni kukungaziphathi kakuhle komdlalo ofuna ukuwukhangela. Funda ukuze ufumanise ukuba sithetha ukuthini, kwaye uya kubona ukuba iisimboli zokubeka azinanto yakwenza nantoni na kwaphela.
Yintoni eguqukayo koomatshini bokubeka?
Ukuguquguquka koomatshini bokubeka imali kuthetha ukuba bahlawula rhoqo kangakanani. I-RTP (ukubuyela kumdlali) ilinganiswa ngokuchasene nenani lamaxesha abadlali abaphumeleleyo kumdlalo kwinani elithile lokujikeleza.
Eminye imidlalo inokungazinzi okuphezulu kwaye eminye isezantsi, kwaye ukwazi ukuba yeyiphi na kwaye zithetha ntoni ezi zinto ziya kukuvumela ukuba ubone ukuba yeyiphi imidlalo oza kuyidlala.
Ukunyaniseka okuphezulu kunye neZantsi eziManyeneyo
Umxholo ungaphezulu kunokuba kunokwenzeka ukuba ube yinto ocinga ngayo kuqala xa kuziwa kwiindawo zokubeka. Le yeyona nto ixhaphakileyo kwaye uya kuyiphawula kuqala, ke ngokuqinisekileyo yinto oza kuyithatha.
Emva koko, uya kuhamba ucinga ngamathuba okuphumelela kweso sithuba. Zonke ii-slots zingahleliwe, ke ukudlala abo bane-RTP ephezulu yinto enokukunceda.
Ke kukho ukungazinzi. Imidlalo eguquguqukayo ayihlawuli rhoqo, kodwa xa isenza, amabhaso athambekele ekubeni makhulu. I-slots ene-volatility ephantsi yezo zihlawula rhoqo, kodwa ngamabhaso amancinci.
Ke, lukhetho lwakho malunga nokuba ukhetha ntoni. Ukuba uyayithanda imbono yokuba namathuba okuphumelela kwaye awukhathali ngejackpot encinci, indawo ezinokutsala okuphantsi (kuwo nawuphi na umxholo kwaye ngenxa yoko naziphi na iisimboli) yile nto kufanele ukuba uyayidlala.
Ukuba ukhetha ukubamba amabhaso amakhulu, iindawo eziphezulu zokungazinzanga zezona zibalaseleyo, nangona kufuneka udlale ngohlahlo-lwabiwo mali engqondweni kungenjalo unokufumana ukuba uleqa impumelelo ngemali ongenakukwazi ukuyilahla. Kwakhona, umxholo kunye neesimboli aziyi kwenza mahluko apha.
Iindlela zokumisela ukungazinzi
Ukuqonda ukungazinzi komdlalo, kuya kufuneka uqale ujonge itafile yomvuzo. Oku kuya kudwelisa ulwazi-eminye imidlalo enokubhalwa kwayo ukuze ubonwe.
Eminye imidlalo isenokungabonakali ngokucacileyo ngolwazi lwabo, kodwa usenokusebenza ukuba zeziphi ezizakulungela wena, nokuba ufuna ukungazinzi okuphezulu okanye okuphantsi. IJackpot ngokwayo iya kuba sisikhokelo esikhulu apha; ukuba yiJackpot enkulu, umdlalo kungenzeka ukuba ungoyena ungazinzanga.
Post Previous:Ubungcali obuphezulu be-10 eNew York kubafundi bamazwe ngamazwe
Okulandelayo Post:Ungasifumana njani iSatifikethi soBuchule soHlaziyo lweDatha kaGoogle